अमेरिकामा झण्डै ७० वर्षपछि महिला कैदीलाई मृत्युदण्ड ! - नेपालबहस
अमेरिकामा झण्डै ७० वर्षपछि महिला कैदीलाई मृत्युदण्ड !
२ कार्तिक २०७७ | १३:५२:१४ मा प्रकाशित
२ कार्तिक, एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकामा झण्डै ७० वर्षपछि एकजना महिला कैदीलाई मृत्युदण्ड दिन लागिएको त्यहाँको न्याय मन्त्रालयले जनाएको छ। लिसा मन्टगमरीले सन् २००४ मा मिसोरीमा एकजना गर्भवती महिलाको हत्या गरेर पेट चिरेर पेटभित्रको बच्चाको अपहरण गरेकी थिइन्।उनलाई डिसेम्बर ८ का दिन इन्डियानामा प्राणघातक सुई लगाइने भएको छ।
मृत्युदण्डसम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्ने केन्द्र डेथ पेनाल्टी इन्फर्मेशन सेन्टरका अनुसार यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाले बनी हेडीलाई मिसोरीमा सन् १९५३ मा मृत्युदण्ड दिएको थियो। दुई जना मन्त्रीहरूको हत्या गरेका ब्र्यान्डन बर्नार्डलाई पनि डिसेम्बरमा मृत्युदण्ड दिने तय गरिएको छ। अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता विलियम बारले भने, ती अपराधहरू जघन्य थिए। ट्रम्प प्रशासनले गतवर्ष मृत्युदण्ड पुनः शुरू गर्ने बताएको थियो।
न्याय मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार डिसेम्बर २००४ मा मन्टगमरी कुकुरको बच्चा किन्ने भन्दै क्यान्ससदेखि मिसोरीस्थित बबी जो स्टिनेटको घर पुगेकी थिइन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, घरभित्र पुगेपछि मन्टगमरीले आठ महिनाकी गर्भवती स्टिनेटमाथि आक्रमण गरिन् र बेहोस बनाइन्। त्यसपछि भान्छामा प्रयोग गर्ने चक्कु प्रयोग गरेर स्टिनेटको पेट चिरिन्। त्यसो गर्दैगर्दा स्टिनेटको होस फर्क्यो। त्यसपछिको सङ्घर्षमा स्टिनेट मारिइन्।
त्यसपछि मन्टगमरी पेटको बच्चा झिकेर आफ्नै बच्चा हो भन्ने प्रयत्नमा लागिन्। सन् २००७ मा उनलाई न्यायाधीशको जूरीले उनलाई अपहरण र हत्यामा दोषी ठहर गर्दै सर्वसम्मतिले मृत्युदण्डको निर्णय गर्‍यो।
सङ्घीय र राज्यस्तरीय मृत्युदण्ड– के फरक छ ?
अमेरिकी न्याय प्रणाली अनुसार अपराधहरू केन्द्रीय तहमा वा राज्य तह दुवैमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। मुद्राको अपचलन र वा चिठीपत्र चोरी स्वतस् सङ्घीय तहमा मुद्दा चलाइन्छ। अरू अपराधको चाहिँ प्रकृति हेरेर सङ्घीय तहमा लगिन्छ। सन् १९७२ मा मृत्युदण्ड राज्यस्तरीय र सङ्घीय दुवै तहमा सन् १९७२ को सर्वोच्च अदालतको एक निर्णयबाट गैरकानुनी बनाइएको थियो र त्यसबेला थाती रहेका सबै मृत्युदण्ड रद्द गरिएको थियो।
सन् १९७६ को सर्वोच्च अदालतको अर्को निर्णयले भने राज्यहरूलाई मृत्यु दण्ड पुनःस्थापित गर्ने अनुमति दिएको थियो। सन् १९८८ मा सरकारले एक कानुन पारित गरेपछि त्यो सङ्घीय तहमा पनि उपलब्ध हुन पुगेको थियो।
डेथ पेनाल्टी इन्फरमेशन सेन्टरले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् १९८८ देखि सन् १९१८ सम्ममा ७८ जनालाई मृत्युदण्ड सुनाइएपनि ३ जनामा मात्र मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गरियो। मन्टगमरी र बर्नार्डको मृत्युदण्डसहित यो वर्ष सङ्घीय सरकारले नौ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको हुनेछ।
मृत्युदण्डसम्बन्धी नियममा किन परिवर्तन ?
ट्रम्प प्रशासनले सङ्घीय मृत्युदण्ड रोकिएको लामो समयपछि पुनः शुरू गर्ने बताएको थियो। त्यसबेला महान्यायाधिवक्ताले भनेका थिए, दुवै पार्टीको प्रशासन भएका बेला न्याय मन्त्रालयले जघन्य अपराधका लागि मृत्यु दण्डबारे निर्णय खोजेको थियो।
न्याय मन्त्रालयको काँधमा विधिको शासन कायम गर्ने दायित्व छ र पीडित र पीडितका परिवारका अगाडि हाम्रो न्याय प्रणालीले निर्णय गरे बमोजिमको दण्ड दिइएको अवस्था हुनुपर्छ। बीबीसी
तालिबानीहरुको अल कायदासँग सम्बन्ध छ : सयुक्त राष्ट्रसघीय अधिकारी ५ दिन पहिले
गोरखाबाट हनुमानढोका दरबारका लागि पठाइयो फूलपातीसहितको डोली १४ मिनेट पहिले
विराटनगरमा दुईजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु ४० मिनेट पहिले
वाणिज्यले दशैँमा पनि बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिने १८ घण्टा पहिले
सरकारले खर्च गर्ने कर राजश्व नेताको ससुरालीको दाईजो होईन १८ घण्टा पहिले
बिपी प्रतिष्ठानमा थप कोरोना संक्रमितको मृत्यु २१ घण्टा पहिले
देशकै ठूलो सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न : १२०० मेगावाट विद्युत् आयातनिर्यात गर्न सकिने १८ घण्टा पहिले
वागमतीमा फूलपाती भित्र्याउने पर्व स्थगित १८ घण्टा पहिले
काभ्रेमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या दोब्बर २४ घण्टा पहिले
आज उपत्यकामा १५५२ जना संक्रमित थपिए १९ घण्टा पहिले
मदिरा सेवन गरेर फ्नै भाइले गरे दाइको हत्या ७ दिन पहिले
बलात्कारी संगठन नामक फेसबुक ग्रुप चलाउने पक्राउ ७ दिन पहिले
सरकारका गलत रबैयाविरुद्ध आक्रोशित बने कोइराला ७ दिन पहिले
मनोज बिष्टको निर्देशनमा दिलको ड्राईभर सार्बजनिक ५ दिन पहिले
कोरोनाबाट विश्वभरी ११ लाख तीन हजारको मृत्यु ७ दिन पहिले
लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार कायमै ३ दिन पहिले
असोज १९ देखि तातोपानी नाका खोल्ने सहमति ३ हप्ता पहिले
महिनौ बोर्डिङ स्कुलमा पढायो, गोजी रित्तै, घर परिवार भोकै ! २ हप्ता पहिले
पहिलो पटक दार्चुलाको अपिहिमालमा एकल पुरुषलाई भत्ता ५ दिन पहिले
प्रिती आलेको नयाँ गीति ‘मस्का’ सार्बजनिक २ हप्ता पहिले
कोरोना संक्रमित २० जनाले गरे प्लाज्मा दान १ हप्ता पहिले
तीन सातामा ९८ फरार प्रतिवादी पक्राउ २ हप्ता पहिले
नयाँबजार ग्याँस सिलिण्डर विष्फोटमा घाइतेको संख्या ११ पुग्यो १ हप्ता पहिले
दक्षिण अफ्रिकामा गोली चल्दा ६ जनाको मृत्यु, सात घाइते ८ महिना पहिले
१२ लाख भारतीय रुपैयाँसहित एक जना पक्राउ ९ महिना पहिले
मेस्सी भन्छन्, ‘म बार्सिलोना छाड्न ईच्छुक छु ‘ २ महिना पहिले
उपत्यकामा रातमा सार्वजनिक सवारी नहुँदा यात्रु हैरान १ वर्ष पहिले